အင်တာနက်အတု — MYSTERY ZILLION
အခုဖြစ်နေတဲ့ problem က ( :Dproblemကိုမြန်မာလိုမရေးတတ်လို့)..........................
ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာတုန်းက kmd မှာ intranet နဲ့ အင်တာနက်သင်တာတွေ့ဖူးတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တာကတော့ web page အခု (20) လောက်ကို complete download ဆွဲ
ထားမယ်ဗျာ...နောက်ပြီးဆိုင်မှာ server တစ်လုံးထိုင်ပြီး ဒီ web page တွေကိုထားမယ်.......
client တွေကနေ broswer ဖွင့် ပြီး ကျွန်တော် server မှာထားတဲ့ web page တွေကို
address bar မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ပေါ်စေချင်တာပါ။ အဲ server မရှိတဲ့ page ကတော့
မရဘူးပေါ့နော့။ဒါမျိူးလေးလုပ် ပြီး အင်တာနက်အတုနဲ့ စာသင်ချင်ပါတယ်............
နမူနာ ပြယုံလောက်ပေါ့ ...........................................ဒီတော့ကာ
၁။ server ထိုင်ရမယ်ဆို ဘယ်လို server မျိုးထိုင်ရမယ်၊ဘယ်လို configuration လုပ်
ရမယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့။ client ဘက်မှာပါဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ
ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတော့ ပြောကြတာ microsoft ရဲ့ IIS ထိုင်၇မယ်လို့ ကြားဖူးထားတယ်ခင်ဗျ
ပါခင်ဗျာ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ်လေး ပြောပေးကြပါလားခင်ဗျာ..........................
ပြီးရင် ပြချင်တဲ့ file တွေကို htdoc အောက်မှာ ထည့်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် browser မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ကြည့်လို့ရပါပြီ
eg~ browsing with domain names etc....
နောက်ပြီး xampp ကိုဘယ်မှာတင်ရမှာလဲခင်ဗျ.........server မှာလားခင်ဗျ
ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းနည်း အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ................
phoethat wrote: »
XAMPP stands for windows apache mysql php
you just need to google it and just download it and just need to install click by click
then, u'll see that u machine already installed the apache and mysql:)
Microsoft က IIS ပဲ သုံးသုံး XAMPP ပဲသုံးသုံးရပါတယ်။
အဲမှာ IP နဲ့ လုပ်ပြီးတော့ address ထည့်ပေါ့
မလုပ်ဘူးရင်အဲလောက်မလွယ်ပါဘူး၊ IIS ရော Apache ရောနှစ်ခုလုံးကအရမ်းခက်တယ်မဟုတ်တောင် လွယ်လွယ်ထထောင်လိုက်ရုံနဲ့တော့မရပါဘူး
သို ့သော်လည်းစမ်းကြည့်ရမှာကတော့မေးတဲ့သူရဲ့တာ၀န်ပဲ ဖြေတဲ့သူကဖြေထားပြီကိုး
xampp ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီခင်ဗျ
ပြစေချင်တဲ့ complete web page တွေကိုလည်း htdocs အောက်ကိုအရာက်ပို့ပြီးကြောင်းပါ
ကျန်တဲ့ security ဘာဘာညာညာလေးတွေလည်းကလိကြည့်ပြီးပြီးခင်ဗျ
ကျွန်တော်က php ,sql,apache နဲ့ပတ်သတ်ပြီး နားမလည်ဘူးခင်ဗျ
apache ကို web server ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့သိထားတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော်က စက်တစ်လုံးကို xampp တင်ထားပြီး htdocs အောက်ကို
ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ web page complete file တွေကို
နောက်ပြီး browser ထဲက address bar ကနေ http:\_\_localhost\_web page name.htm
လို့ရောက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်း web page တက်လာပါတယ်
နောက်စက်တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ပြီး ဒုတိယ စက်မှာ browser ထဲ၀င်ပြီး proxy setting ကို
ပထမစက်ရဲ့ ip ကိုပေးလိုက်ပါတယ် port ကို 80 လို့ထည့်ထားပါတယ်...........
browser address ဘားကနေပြီး www.name.com ဆို ပြီး ဘာရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်
xampp ရဲ့ home page ကျလာပါတယ်.............................................
ကျွန်တော် ပထမစက်မှာရှိတဲ့ htdocs အောက်မှာထည့်ထားတဲ့ web page တွေကို
http:\_\_ပထမစက်Ip\_web page name.htm ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ထို page ကျလာပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်က ဒုတိယစက်က browser က address bar ကနေ ပြီး htdocs မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်း
ကိုစေတန်ပြောတဲ့ hosts file ကိုရောဘယ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး configuration
client တွေ ရဲ့ browser address ဘားမှာ http:\_\_www.name.com ဆိုပြီး အတိအကျသုံးနေရသလိုမျိူး
ကိုစေတန်ပြောတဲ့ဟာက run ကနေ c:\_windows\_system32\_drivers\_etc\_hosts လို့ရိုက်။
နောက် open with ပေါ်လာရင် notepad နဲ့ဖွင့် ပြီးရင် IP+websitename ရေးပြီး save လုပ်၊ထွက်။ ဟုတ်လားတော့မသိဘူး :P :P
dun have too much time
so, lets go to the short to the point
consider that the web svr's ip is
then, u need to runaDNS svr
(both of forward and reverse)
then u can start to browse the site with the domain
yes it's like that:)
အလုပ်မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမလား မှတ်ပါတယ် လင့်တွေကို အကုန်လိုက်ပိတ်ထားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ????
@bibilio‌ There are several ways of bypassing or tunneling. But if your job's policy is not allowing, you shouldn't do it. When you need to download for the job, you can explain and request permission to do it.